Ntopng - ထူးချွန်သောနောက်မျိုးဆက်ကွန်ယက်အသွားအလာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း Linux မှ
Ntopng - နောက်မျိုးဆက်သစ် network traffic monitor
«Ntopng» အရမ်းကောင်းတယ် မျိုးဆက်သစ်ကွန်ယက်အသွားအလာမော်နီတာတနည်းကအဖြစ်လူသိများမူရင်းအစီအစဉ်၏နောက်မျိုးဆက် updated ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် «Ntop», မှဖန်တီးသည် အင်္ဂလိပ်အဖွဲ့အစည်း အမည်တူ၏။ အထူးဖွံ့ဖြိုးကြောင်းအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ယက် software ကို, အများအားဖြင့် open source software ကိုအခမဲ့နှင့်အမြတ်အစွန်းနှင့် / သို့မဟုတ်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။
«Ntopng» အခြေခံအားဖြင့်ဒါက ကွန်ယက်အသွားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေး အရာကွန်ယက်အသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်။ ထို့အပြင် «Ntopng» အပေါ်အခြေခံသည် «libpcap» (စာအုပ်ဆိုင် အဖြစ်ရေးသားခဲ့သည် အစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အကြီးမားဆုံးခေါ် TCPDump) နှင့်၎င်းကိုပလက်ဖောင်းအားလုံးနီးပါးတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အလွန်သယ်ဆောင်ရလွယ်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရေးသားခဲ့သည် «Unix», «MacOSX»နှင့်လည်းအကြောင်းကို «Windows».
«Ntopng» တကယ်တော့သူကထောက်ပံ့ပေးသည် အလိုလိုသိနှင့် encrypted ဝဘ်အသုံးပြုသူ interface ကို ၏ရှာဖွေရေးများအတွက် Real-time network traffic information နှင့်သမိုင်း။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး ဗားရှင်းစဉ်းစားသည် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အနိမ့်သယံဇာတသုံးစွဲမှုယခင်သဘာဝ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ထုတ်ကုန် «Ntop».
၏များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများများထဲတွင် «Ntop»နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သော web interface အပြင်၎င်းသည်အသုံးပြုသူအားအကြောင်းကြားရန်စွမ်းရည်ဖြစ်သည် မျိုးစုံကွန်ယက်ကို protocols များထိုသို့သောအဖြစ် «ARP, ICMP, Decnet, DLC, IPX, Netbios, TCP, UDP» နှင့်များစွာသောအခြား။
1.3.1 Ubuntu အတွက်
1.3.2 DEBIAN အတွက်
ကွန်ရက်အသွားအလာပြပါ။ Real-time နှင့် active host နှစ်မျိုးလုံး။
geolocate နှင့် overlay hosts: ပထဝီမြေပုံပေါ်တွင်။
အချက်ပေးအင်ဂျင် Anomalous နှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ကိုဖမ်းယူရန်။
စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့် ကွန်ယက်ကိရိယာများ - မှတဆင့် SNMP v1 / v2c ။
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း protocol ကိုဖယ်ရှားခြင်း - GTP / GRE အပါအ ၀ င်။
IP အသွားအလာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အရင်းအမြစ် / ဦး တည်ရာအရသိရသည်ခွဲခြားရန်ပင်သွား။
ကွန်ရက်အသွားအလာစာရင်းအင်းများကိုထုတ်လုပ်ပါ။ HTML5 / AJAX နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်း။
လက်ရှိ network protocol များအတွက်အပြည့်အဝထောက်ခံမှုပေးပါ IPv4 နှင့် IPv6 တို့ပါ ၀ င်သည်။
အိုင်ပီ protocol ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်အစီရင်ခံစာ: protocol ကိုအမျိုးအစားအားဖြင့်ကခွဲခြားရန်ပင်သွား။
အလွှာ2protocols များ (အလွှာ-2) နှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်တဲ့: ARP စာရင်းဇယားများပါဝင်သည်။
ကွန်ရက်မက်ထရစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ရေရှည်အစီရင်ခံစာများကိုထုတ်လုပ်ပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လျှောက်လွှာ protocols များအပါအဝငျ။
အဓိကညွှန်းကိန်းများစာရင်း: ထိပ်တန်းဟောပြောသူများ (ထုတ်လွှင့်သူများ / လက်ခံစက်များ)၊ Top ASs၊ Top L7 အပလီကေးရှင်းများ။
မြဲမြံသောယာဉ်ကြောစာရင်းအင်းကို disk ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းပါ။ အနာဂတ်စူးစမ်းလေ့လာမှုနှင့်သေဆုံးပြီးနောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုခွင့်ပြုရန်။
HTTP အသွားအလာကိုဖော်ပြပါ။ ပေးထားသောလုံခြုံသောအင်တာနက်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအခွင့်ကောင်းယူခြင်း Google y HTTP အနက်ရောင်စာရင်း.
ကွန်ယက်လမ်းကြောင်းကိုစီရန်: အိုင်ပီလိပ်စာ၊ ဆိပ်ကမ်း၊ L7 ပရိုတိုကော၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစနစ် (AS) စသည့်စံသတ်မှတ်ချက်များစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
စောင့်ကြည့်လေ့လာထားသောအချက်အလက်များကိုတင်ပို့ခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့: MySQL, ElasticSearch နှင့် LogStash ကိုသုံးပါ။ MySQL အတွက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောသမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည်။
Application protocol ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ ယူကျု၊ BitTorrent စသည့် nDPI (နက်ရှိုင်းသောအစုံလိုက်သုံး packet စစ်ဆေးခြင်း) နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။
ကွန်ယက် parameters များကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအစီရင်ခံပါ live စွမ်းဆောင်ရည်၊ network နှင့် application latency များ၊ Round Trip Time (RTT)၊ TCP စာရင်းအင်းများ (retransmissions, service of packets ဆုံးရှုံးသွားသော packets) နှင့် bytes နှင့် packets များပါဝင်သည်။ ။
ရပ်ရွာ: အခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဗားရှင်း (GitHub တွင်တည်ခင်းည်) အ GNU GPLv3 အောက်မှာလိုင်စင်ရ။
မှတ်စု: ဗားရှင်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စီးပွားရေး အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သောအပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များကိုကမ်းလှမ်းပါ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဒါမှမဟုတ်ပိုကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းများ။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအခြေအနေများသို့မဟုတ်ကန့်သတ်) သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအတွက်စဉ်းစားနေကြသည် အသုံးပြုသူလိုင်စင်သဘောတူညီချက် (အသုံးပြုသူအဆုံး License Agreement ကို - UELA) ။
မှတ်စု: လိုအပ်သော network interface (များ) ကိုသာထပ်မံဖြည့်တင်းရမည်။
အဆိုပါ ntopng.start ဖိုင်၏ပုံမှန်အကြောင်းအရာ
Web browser ကို Ntopng သို့စတင်ပါ
Ntopng login မျက်နှာပြင်
မှတ်စု: ပုံမှန်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ဖြစ်သည် «admin» - «admin»
ငါတို့မြင်နိုင်ပါတယ် «Ntopng» များအတွက်အလွ tool တစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့ဆော့ဝဲ သောကျွန်တော်တို့ကို၏အဆင့်မှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းရည်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားပါတယ် ကွန်ယက်အသွားအလာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာများ၏။ အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ပိုသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့် operating systems အချို့ကိုအသေးစိတ်လေ့လာရန်အတွက် «Ntopng» ၎င်းသည်ကြိုးစားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
သငျသညျအစဉျအမွဲအသုံးပြုသည်ဆိုပါက, မင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုငါတို့နဲ့မျှဝေပါ မှတ်ချက်တွေကတဆင့်ငါတို့အတူတကွတစ်ခုလုံး၏အသိပညာကြွယ်ဝစေတယ် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အသိုင်းအဝိုင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Ntopng - နောက်မျိုးဆက်သစ် network traffic monitor
၀ က်ဘ်ဆာဗာများ။ ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောပရိုဂရမ်များ
XFCE 4.16 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်စတင်ခဲ့သည်